"မင်းဟာ ဘာအသုံးကျသလဲ၊ ငါတို့က မင်းကို ဘယ်အထိ ကျွေးမွေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် နေရဦးမှာလဲ။ ဒီအသက် ဒီအ ရွယ်အထိ ကိုယ်အသက်ကို မင်းမမွေးမြူနိုင်တာ မင်းမရှက်ဘူးလား။ မင်းယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မင်းရေးနေတဲ့ ကဗျာက မင်းဘဝကို ဘယ်လောက်အထိ အာမခံချက် ပေးနိုင်သလဲ။ မင်းရဲ့ယုံကြည်မှုက ဘယ်လောက်ထိ ခိုင်မာသလဲ ကြည့်ရသေး တာပေါ့။ မင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကို မင်းကိုယ်တိုင် လက်နက်ချ အညံ့ခံတဲ့တနေ့မှာ မင်းပြန်လာခဲ့ပေါ့" ထိုအသံတို့၏ ဝေးရာသို့ သူသည် ထွက်ပြေးနေခဲ့သည်မှာ ကြာပြီ။ ဘယ်လောက်ထိအောင်ပြေးပြေး အသံတို့သည် သူနောက်ပါးမှ ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါနေတော့သည်။
"ဘဝဆိုတာ တမျဉ်းခင်းတဲ့ လမ်းပမာလို့ အကိုက ယုံကြည်နေသလားဟင်၊ အချစ်ဆိုတာကရော အဲဒီလို ချောမွေ့နေတဲ့ လမ်းကနေ လျှောက်လှမ်းလာနေတယ်လို့ရော အကိုက ထင်နေသလား၊ ခံစားမှုသက်သက်ပဲ ရှိတဲ့ နှလုံးသားမှာ ငွေကြေး ကိန်းဂဏန်းတွေကို တွက်ချက်တတ်တဲ့ ဥဏှောက် မပါဘူးဆိုတာ အကို ယုံကြည်စေချင်တယ်၊ ညီမအတွက်တော့ စိတ်ခံစား မှု တခု ပြည့်ဝစေတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်မှုတခုပဲ လိုအပ်တာပါ၊ ဒါဟာ ညီမ အကို့ကိုချစ်တဲ့ မေတ္တာတရားပါ၊ အခု အကို မနားတမ်းလျှောက်နေတဲ့ အဲဒီလမ်းရဲ့အဆုံးမှာ ညီမစောင့်မျှော်နေပါတယ်။ မြန်မြန်သာ လျှောက်လှမ်းခဲ့ပါတော့ အ ကို"
"စောင့်မျှော်ခြင်း နာရီတွေသာ ခရီးထွက်သွားမယ်ဆိုရင် အခုလောက်ဆို နယူးယောက်မြို့ ကြီးကို ရောက်နေလောက်ပြီ"ဟု ကဗျာဆရာ မောင်ချောနွယ်က ပြောဘူးလေသည်။ သူ့မှာ နာရီတလုံးမှ မရှိပါ၊ အချိန်ဆိုတာ အလင်းရောင် ရှိခြင်း မရှိခြင်းဖြင့်သာ သူက သတ်မှတ်ထားသည်။ ဘာကို သူက စောင့်မျှော်နေရမှာလဲ ၊ နောက်လာမဲ့ နာရီ စက္ကန့် နေ့ရက်တို့မှာ ဆက်လက် ရှင်သန်ရမဲ့ သူ့၏ထွက်သက် ဝင်သက်ကိုလား၊ သူ့မှာ ဒါပဲ စောင့်မျှော်စရာရှိပါသည်။ ရှင်သန်လိုမှု သက် သက်ဖြင့်တော့ အပြောကျယ်လှသော ပင်လယ်ပြင်ကြီးတွင် လက်ပစ်ကူးမနေချင်ပါ။
ပြန်ကြစို့ ………. အချစ်လေး …………… ဘဝဆိုတာ …………. မသေချာ"